အမှတ်တံဆိပ်အတွက်အွန်လိုင်းမှဝန်ဆောင်မှု LOGASTER - အွန်လိုင်းန်ဆောင်မှုများ - 2019
သည့်အခါပျင်းရိ PC ကိုအိပ်စက်ခြင်းမုဒ်ကိုဖွင့်ပေးခြင်းစွမ်းအင်ကယ်တင်တော်မူ၏။ အထူးသဖြင့်ဒီ feature ဟာပြည်တွင်းရေးဘက်ထရီစွမ်းအားဖြင့်သောလက်ပ်တော့မှသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ဒီအင်္ဂါရပ်သို့ရာတွင်ထိုသို့ကိုယ်တိုင်ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ် Windows7ကို run ကိရိယာများပေါ်တွင် enabled ဖြစ်ပါတယ်။ windose7အတွက်အိပ်စက်ခြင်းပြည်နယ်ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သူအသုံးပြုသူတစ်ဦးအကြောင်းကိုဘာလုပ်ရမှန်းထွက်ရှာတွေ့ကြပါစို့။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Windows တွင်အိပ်စက်ခြင်း mode ကို disable လုပ်ဖို့ကဘယ်လို 7
Windows7ကိုမှာဟိုက်ဘရစ်အိပ်ပျော်ခြင်း mode ကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါဟာကွန်ပျူတာကမဆိုအရေးယူလုပ်နေတာမရှိဘဲအချို့အချိန်ပျင်းရိအခါကသော့ခတ်ပြည်နယ်မှလွှဲပြောင်းသောတကယ်တော့တည်ရှိသည်။ hibernation တစ်ပြည်နယ်ဖြစ်ပေါ်မပါဘူးဆိုရင်အဖြစ်လုံးဝ PC ကို disable ဖြစ်သော်လည်းအထဲတွင်အားလုံးဖြစ်စဉ်များအေးခဲနေသည်, နှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုပမာဏ၏အဆင့်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်မျှော်လင့်မထားတဲ့အာဏာကိုရပ်စဲ system state ကို၏အမှု၌ hiberfil.sys ဖိုင်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ် hibernation ထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ဒါကစပ် mode ကိုဖြစ်ပါတယ်။
နည်းလမ်း 1: "Start ကို" မီနူး
မီနူးကနေတဆင့်အိပ်ပျော်ခြင်း mode ကို enable ဖို့ဘယ်လိုအသုံးပြုသူများအကြားအကျော်ကြားဆုံး "Start".
ကလစ်နှိပ်ပါ "Start"။ မီနူးပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "Control Panel ထဲက".
ထိုအခါအုပ်စု "ပါဝါ" အမည်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "ဟုအဆိုပါအိပ်စက်ခြင်းမုဒ်ကိုချိန်ညှိခြင်း".
ဤသည်စွမ်းအင်ထောက်ပံ့ရေးအစီအစဉ်ကိုပါဝင်ပတ်သက်နေ settings ကိုပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အိပ်လျှင်, လယ်ပြင်ပိတ်ထား "အိပ်ကွန်ပျူတာထားပါ" ဒါဟာသတ်မှတ် "ဘယ်တော့မှမ"။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးသင်လိုအပ်ဒီ function ကို, ကို enable လုပ်ဖို့, လယ်ပြင်ပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ။
သင်ကွန်ပျူတာပျင်းရိအိပ်ပျော်ခြင်းပြည်နယ် switched ပါလိမ့်မည်ဘယျအခြိနျတစျဆငျ့ရှေးခယျြနိုငျသောအနေဖြင့်စာရင်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်။5နာရီကြာမှ 1 မိနစ်ကနေတန်ဖိုးရွေးချယ်ရေးအကွာအဝေး။
ယင်းအချိန်ကာလမရွေးပြီးတာနဲ့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Save Changes"။ ထို့နောက်အိပ်ပျော်ခြင်း mode ကို activated မည်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါ PC ကိုလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုသတ်မှတ်ထားသောသက်တမ်းအပြီးပြုလုပ်သို့ဝင်။
လက်ရှိအစီအစဉ်ကိုလျှပ်စစ်ပါဝါလျှင်ဒါ့အပြင်ဒီ window ထဲမှာသင်က default restore ပြန်အားဖြင့်အိပ်မက်ပြည်နယ်ကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ် "ဟန်ချက်ညီ" သို့မဟုတ် "သိမ်းဆည်းစွမ်းအင်".
ဒီလိုလုပ်ဖို့, ထိုတံဆိပ်များကို click "ပုံမှန်အစီအစဉ် Restore".
ဤသည်၎င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုအတည်ပြုပေးရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ dialog box ကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ စာနယ်ဇင်းများ "Yes" ကို.
ပါဝါ၏အစီအစဉ်များဆိုတဲ့အချက်ကို "ဟန်ချက်ညီ" နှင့် "သိမ်းဆည်းစွမ်းအင်" ကို default ကတော့အိပ်စက်ခြင်းပြည်နယ် activated ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ hibernation သို့ရာနောကျအကူးအပြောင်းကို PC လှုပ်ရှားမှုသာကာလ, ကွဲပြားခြားနားသည်:
ဟန်ချက်ညီ - 30 မိနစ်;
စွမ်းအင်ချွေတာ - 15 မိနစ်။
သို့သော်ထိုသို့ဤကိစ်စတှငျ default အနေဖြင့်ပိတ်ထားသည်ကတည်းက Hibernate အလုပ်မလုပ်ပါဘူးထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ထည့်သွင်းရန် high-performance ကိုအစီအစဉ်သည်။
Method ကို 2: Tool ကို "Run ကို"
ထို့အပြင် box ထဲမှာရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်ပါဝါအစီအစဉ် settings ကိုပြတင်းပေါက်ဖို့အကူးအပြောင်းအောင်, hibernation ၏ပါဝင်မှုရှိနိုင်ပါသည် enable "Run ကို".
ခေါ်ရန်ပြတင်းပေါက် "Run ကို"စာရိုက်ပေါင်းစပ် ဦးဝင်း + R ကို။ လယ်ပြင်၌ Enter:
ရွေးချယ်ရေး box ကိုပါဝါအစီအစဉ်ကိုဖွင့်လှစ်။ Windows7ကိုသုံးပါဝါအစီအစဉ်ရှိပါတယ်:
စွမ်းအင်ချွေတာ သင်တစ်ဦးကမ္ပည်းကို click သည့်အခါလှုပ်ရှားမှု၏ဖြစ်ရပ်တွင်ပြသမည်ဖြစ်ကြောင်း (Optional အစီအစဉ် "အပိုဆောင်းအစီအစဉ်များပြရန်").
ယခုအချိန်တွင်ခေတ္တအစီအစဉ်တက်ကြွစွာရေဒီယိုခလုတ်ကို designated ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအစီအစဉ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ဆန္ဒရှိလျှင်အသုံးပြုသူကပြန်စီနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်အစီအစဉ်များကို setting ကို default အားဖြင့်တည် ထား. , သငျသညျက high-performance ကို၏ထို option ရှိသည်, ပြောင်းရန်ရန်လွယ်ကူနေကြတယ်, အကယ်. "ဟန်ချက်ညီ" သို့မဟုတ် "သိမ်းဆည်းစွမ်းအင်", သငျတို့သညျအိပျပျြော mode ကို switch ကိုသက်ဝင်စေ။
default settings ကိုပြောင်းလဲပစ်ကြသဖြင့်, hibernation အားလုံးသုံးလေယာဉ်ထဲမှာပိတ်ထားပါက, ထို့နောက် "ဟုကမ္ပည်းအပေါ်ကလစ်ရွေးချယ်ခြင်းပြီးနောက်ပြောင်းလဲမှုအစီအစဉ်ကို setting များကို ".
လျှပ်စစ်ပါဝါ parameters တွေကိုလက်ရှိအစီအစဉ်၏ပြေးပြတင်းပေါက်။ လယ်ပြင်၌ယခင်နည်းလမ်း "နှင့်အတူအမျှ"အိပ်စက်ခြင်း mode မှာကွန်ပျူတာထားပါ သငျသညျအစိုးရအပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်ရသောအပြီးတိကျတဲ့အသုံးအနှုန်း, သတ်မှတ်ရန်လိုသည်။ ထိုအခါကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Save Changes".
အစီအစဉ် "ဟန်ချက်ညီ" သို့မဟုတ် "သိမ်းဆည်းစွမ်းအင်" အဆိုပါအိပ်ပျော်ခြင်း mode ကို activate လုပ်ဖို့, သင်ကိုလည်းတံဆိပ်ကို click နိုင်ပါတယ် "ပုံမှန်အစီအစဉ် Restore".
Method ကို 3: အပိုဆောင်း parameters တွေကိုပြောင်းလဲမှုများ
ဒါ့အပြင် activation သင်လက်ရှိအာဏာကိုအစီအစဉ်၏ setting တွင်အပိုဆောင်းရွေးချယ်စရာအားဖြင့်အပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်, အိပ်ပျော်ခြင်း mode ကို enable ။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားခဲ့ကြသောနည်းလမ်းများမဆိုအားဖြင့်လက်ရှိအာဏာကိုအစီအစဉ်ကိုပြတင်းပေါက်ဖွင့်ပါ။ ကလစ်နှိပ်ပါ "အဆင့်မြင့်ပါဝါ setting များကိုပြောင်းလဲပါ".
window ကိုအပိုဆောင်း setting များကိုပြေး။ ကလစ်နှိပ်ပါ "အိပ်မက်".
ပေါ်လာသော list ထဲမှာသုံးရွေးချယ်စရာကနေ select လုပ်ပါ "နောက်မှအိပျပျြော".
သင်သည်သင်၏ PC ပေါ်မှာအိပ်နေလျှင်ပိတ်ထားပါက setting အကြောင်း "Value ကို" ဒါဟာတစ်ဦး option ကိုဖြစ်သင့် "ဘယ်တော့မှမ"။ ကလစ်နှိပ်ပါ "ဘယ်တော့မှမ".
ဤသည်ကိုလယ်ဖွင့်လှစ် "အခြေအနေ (မိ။ )"။ လှုပ်ရှားမှု၏အမှု၌ယင်းကွန်ပျူတာသည်အိပ်စက်ခြင်းပြည်နယ်ရိုက်ထည့်ပါလိမ့်မယ်, အရာပြီးနောက်ဒါဟာမိနစ်, တန်ဖိုးရိုက်ထည့်။ စာနယ်ဇင်းများ "အိုကေ".
သငျသညျလျှပ်စစ်ဓာတ်အား parameters တွေကိုလက်ရှိအစီအစဉ်၏ပြတင်းပေါက်ပိတ်ဖို့, ပြီးတော့သူက re-ကိုသက်ဝင်ပြီးနောက်။ အထဲတွင်အမှန်တကယ်အချိန်ကို PC တဲ့အခါမှာပျင်းရိအိပ်တတ်သောပြသပါလိမ့်မည်။
Method ကို 4: အိပ်စက်ခြင်း mode ကိုမှချက်ချင်းအကူးအပြောင်း
တစ်ဦးကို PC နေပါစေ settings ကိုပါဝါရွေးချယ်စရာရှိကြ၏ဘယ်အရာကိုအိပ်ပျော်ခြင်းမှချက်ချင်းလွှဲပြောင်းရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့ option ကိုလည်းရှိပါသည်။
ကလစ်နှိပ်ပါ "Start"။ ၏ညာဘက် "Down Shut" ညာဘက်ထောင့်မှညွှန်ပြနေတဲ့တြိဂံ၏ပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာ icon ကို click လုပ်ပါ။ အဆိုပါတိုးချဲ့စာရင်းထဲက, select လုပ်ပါ "အိပ်မက်".
ထို့နောက်ကွန်ပျူတာအိပ်ပျော်ခြင်း mode ကိုပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, windose7အတွက် hibernation install ဖို့နည်းလမ်းတွေထဲကအများစုဟာအာဏာကို setting တွင်အပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ သို့သော်အပြင်, တစ်ခလုတ်ကိုမှတဆင့်သတ်မှတ်ထားသော mode ကိုမှချက်ချင်းအကူးအပြောင်းတစ်ခု option ကိုလည်းမရှိ "Start"setting များကိုကျော်လွှား။
ဗီဒီယို Watch: Tutorial para crear logos gratis con Logaster! (နိုဝင်ဘာလ 2019).